“Saalax iyo Mane kuma biiri doonaan Real Madrid ama Barcelona” – McManaman – Gool FM
(Liverpool) 20 Mar 2020. Halyeeyga kooxda kubadda cagta Liverpool ee Steve McManaman ayaa sheegay in labada xiddig Sadio Mané iyo Maxamed Saalax aysan ku biiri doonin kooxaha Real Madrid iyo Barcelona.
Xiddigaha Sadio Mané iyo Maxamed Saalax ayaa lala xiriirinayay ku biiritaanka safka kooxda Real Madrid, gaar ahaan laacibka reer Senegal, marka loo fiiriyo bandhiga cajiibka ah ay ka sameeynayaan Reds.
Wargeyska “Daily Mail” ee dalka England ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay Steve McManaman waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Real Madrid waxay heysataa Eden Hazard iyo Rodrygo”.
“Marka loo fiiriyo waxa ka dhacaya Champions League xilli ciyaareedkan, kooxaha Ingariiska ayaa ah kuwa adduunka ugu fiican haatan, ee ma ahan Real Madrid iyo Barcelona”.
“Labada kooxood waxay rabaan inay keensadaan ciyaartooy cusub, sababtoo ah waxay soo mareen xilli ciyaareed niyadjab ah”.
“Uma maleynayo inay jirto fursad ay Sadio Mané iyo Maxamed Saalax ugu biiri karaan kooxaha Real Madrid ama Barcelona.”